China Glass Bottle Liquor filling machine factory na suppliers | Higee
Akpaka Cup Type Chemical ...
Automatic ncha ntutu ndochi M ...
Akwa ikike sirop na-ejuputa ...
Mkpa mmanụ ndochi machi ...
Ngwunye igwe anyị na-ejuputa mmanya na-ejikọ igwe ịsa mmiri, njuputa na igwe ntinye n'ime igwe monoblock. The usoro na-rụrụ n'ụzọ zuru ezu na-akpaghị aka.
Tụkwasịnụ Ikike: 30 Setịpụrụ / ọnwa
Okwu ahia: FOB, CNF, CIF, BW
Port: Ọdụ ụgbọ mmiri Shanghai na China
Oge ịkwụ ụgwọ: TT, L / C
Production ụzọ oge: Nọmalị 30-45 ụbọchị, ọ ga-reconfirmed.
Mpi Glass karama Wiski filler Machine Monoblock Production Line
Igwe akụrụngwa nke na-akpọtụrụ mmiri mmiri bụ nke igwe anaghị agba nchara, Ihe ndị dị egwu bụ nke akụrụngwa na-achịkwa ọnụọgụ, yana ọnọdụ igwe niile dị n'okpuru nchọpụta site na ihe mmetụta foto. Ọ bụ uru nke nnukwu akpaaka, ọrụ dị mfe, nguzogide abrasive dị mma, nkwụsi ike dị elu, ọnụego ọdịda dị ala, wdg.
Anyị nwekwara ike ịkwadebe ihe eji biya biya na akụrụngwa ọgwụgwọ mmiri, sistemụ igwekota ihe eji agwọ ọrịa, yana sistemụ ngwugwu gụnyere igwe eji ahazi aka, belata igwe na ihe ndị ọzọ.
1.Screw feeder maka karama karama
2.Whisky karama Washingsa ndochi na Capping Machine
igwe na-ejuputa igwe na-ekpocha ahihia, na-ejuputa mkpocha mmiri na ntinye n'ime otu monobloc, a na-arụkwa usoro atọ ahụ na akpaghị aka. A na-eji ya na ndochi nke mmiri ịnweta mmiri, mmiri dị ọcha, na ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ na-abụghị carbonated (Dị ka wiski). Maka ihe eletriki, anyị na-eji Mitsubishi, Omron, Schneider, Airtac, wdg ndị bụ akara ama ama na nke nwere mmesi obi ike. Igwe ọ bụla nke kpọtụrụ na mmiri ahụ bụ nke igwe anaghị agba nchara. Ihe ndị dị egwu na-eme site na igwe akụrụngwa na-achịkwa ọnụọgụ, yana ọnọdụ igwe niile dị n'okpuru nchọpụta site na foto foto, enweghị karama enweghị nju, enweghị karama enweghị capping. Ọ bụ na uru nke elu akpaaka, mfe ọrụ, ezi abrasive eguzogide, elu kwụsie ike, ala ọdịda ọnụego, wdg The àgwà esịmde mba elu larịị. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị na - etinye ego maka ihe ọ newụ newụ ihe ọ newụ andụ ochie na nke ochie.
A-N'iji ngwongwo na-eme ka ọkpụkpụ na-eme ka ihe na-eme ka ihe dị na ya, ọkpụkpụ karama ahụ na-adịgide adịgide; dị oke mma ma dị ngwa iji karama dị iche iche iji mejupụta otu igwe ahụ site n'ịgbanwe elu nke ebufe na ọtụtụ mgbanwe akụkụ.
● N'iji usoro iwu ndọda, njuju ọsọ ọsọ na nkenke dị elu; ndochi larịị kemeghi.
A-spring Na mmiri ụdị asa mkpagide, efu karama na-tụgharịrị 180 Celsius tinyere ndị mpịakọta mpịakọta maka n'ime rinsing; nozulu nozulu adopts piom okooko udi otutu oghere itucha kalama ala, saa arụmọrụ dị elu.
● Capping igwe nakweere France teknụzụ, ihe mkpuchi ya bụ magnet torque; okpu a na-ejide ijide ugboro abụọ iji hụ na eziokwu a. Ike mkpuchi nwere ike idozi, ntinye aka na-agagharị agaghị emebi emebi na okpu dị mma ma nwee ntụkwasị obi.
A-● A na-arụ ọrụ igwe niile site na ihuenyo mmetụ aka, nke PLC na-achịkwa na ntụgharị ntụgharị ugboro ugboro, na-arụ ọrụ nke enweghị karama enweghị nri nri, na-eche mgbe enweghi karama, ịkwụsị ma ọ bụrụ na egbochi karama ma ọ bụ enweghị okpu na okpu na-eduzi ọkpọkọ.
Onye na-ebu okpu na-ebufe okpu ya na igwe mkpuchi okpu. Ọ nwere ọrụ nke enweghị karama enweghị okpu na-ebugharị, njikwa na-akpaghị aka.
4.Beer Bottle ebu
Nke gara aga: Glass karama Beer Na-ejuputa igwe
Osote: Usoro ọgwụgwọ mmiri